NgoLwesihlanu omnyama kufutshane nekona kwaye ezi zezinye zezona zinto zintengiso zangaphambili | Iindaba zeGajethi
Ukuba kule veki iphelileyo sikunike ezona zinto zibalulekileyo zinomdla kwi-Singles Day ethi nyaka ngamnye izuze ukuthandwa ngakumbi kwilizwe lethu, ngoku kufuneka siqale ukuyilungiselela. ULWESIHLANU omnyama okanye ngolwesihlanu omnyama, yintoni Iya kubanjwa nge-25 kaNovemba. Kwaye iivenkile ezininzi ezikhoyo sele zikhathalele enye yeentsuku ngelona nani likhulu lezinto ezinomdla zonyaka.
IAmazon yenye yezo venkile namhlanje esele isungule izibonelelo ezininzi eyona inomdla, kwaye ngaphandle kokulinda uLwesihlanu oMnyama. Sele uyazi ukuba singabalandeli bokwenyani abanxulumene netekhnoloji kwaye sibona ukuba inkampani ikhokelwe njani nguJeff Bezos isungulwe, asinakusilela ukukubonisa izibonelelo eziphambili esele zikho.
1 Izibambiso zaseAmazon
2 Izibonelelo ngoNovemba 18
2.1 Iselfowuni Onetouch Pop 3
3 Izibonelelo ngoNovemba 17
3.2 I-Sony Smart Watch 3 engwevu yentsimbi
4 Izibonelelo ngoNovemba 16
4.2 I-Logitech K400 kunye nekhibhodi engenazingcingo
5 Izibonelelo ngoNovemba 15
5.1 Ikhadi lememori le-128GB le-MicroSD
6 I-Intex Aqua Prime
7 Izibonelelo ngoNovemba 14
7.1 I-Sony Smartwatch 3 iMidlalo
7.2 I-Motorola Moto G4 Play
Ukusukela namhlanje kude kube ngu-Novemba 20, iAmazon izakwazisa ngokusesikweni yonke imihla, ukuze sonke sifudumele uLwesihlanu oMnyama. Ewe kunjalo, ukuba siyaqhubeka kwinqanaba elibonisiweyo namhlanje, ndiyakholelwa ukuba xa ufika ngoNovemba 25, bambalwa kuthi abaya kuba nemali yokuchitha.
Izibonelelo ngoNovemba 18
Apha ngezantsi sikubonisa izibonelelo zangoLwesihlanu, Novemba 18;
Siyaqhubeka nezibonelelo ukuya kuthi ga kwizixhobo eziphathwayo kwaye namhlanje iAmazon isinika oko Iselfowuni i-Onetouch Pop 3 ngexabiso elinomdla kakhulu kwi-euro ye-73.99.
Izibonelelo ngoNovemba 17
Apha ngezantsi sikubonisa izibonelelo zangoLwesine, Novemba 17;
Iintsuku ezingaphambi koLwesihlanu oMnyama zisishiya nezahlulo ezintle kwiAmazon ngokweewatchwatches kunye neewotshi kwaye namhlanje sinokuyithenga le ngexabiso elinomdla kunelo Garmin Forerunner 230.
I-Sony Smart Watch 3 engwevu yentsimbi
Kule veki sele sibonile indlela iAmazon eyehlise ngayo imodeli esisiseko ye I-Sony Smart Watch 3, kodwa namhlanje yayilithuba lokugqibela leprimiyamu yesi sixhobo enesiphelo esihle kakhulu sesinyithi. Ixabiso eliqhelekileyo lale smartwatch liphezulu kakhulu kunee-euro ezingama-200, kodwa okokugqibela namhlanje Singayithenga nge-euro ezili-129 kuphela.
Izibonelelo ngoNovemba 16
Apha ngezantsi sikubonisa izibonelelo zangoLwesithathu, Novemba 16;
Namhlanje iAmazon isinika isaphulelo esinomdla kwesinye sezixhobo ezihamba phambili zentengiso kwintengiso enje IPhone 6 Plus. Nge-iPhone 7 kwimarike, kubonakala ngathi ixesha lifikile ukuba liqalise ukuphela kwestokhwe seeterminal "ezindala" zika-Apple.
Nge Isaphulelo sento engenanto kwaye akukho nto ingaphantsi kwee-euro ezingama-190 sinokuba ne-iPhone yee-euro ezingama-509 kuphela. Ewe kunjalo, lisebenzise eli thuba ngoku kuba liya kufumaneka kuphela iiyure ezingama-24.
Unokufumana i-iPhone 6 ngexabiso lehlazo LAPHA.
Ikhibhodi engenazingcingo ILogitech K400 kunye
Ikhibhodi engenazingcingo inokugqibelela ukusebenza kwimihla yakho yemihla ngemihla okanye ukuyisebenzisa nge-smart TV yethu, ukuba nje singayithenga ngexabiso elifanelekileyo. Yiyo imeko namhlanje kwaye iAmazon isinika i ILogitech K400 Plus ngexabiso elimangalisayo lama-euro angama-22.90 okanye yintoni isiqingatha ngokulinganayo sento esiqhele ukuyixabisa?
Thenga le Logitech K400 ngoku LAPHA.
Izibonelelo ngoNovemba 15
Nazi izibonelelo zangoLwesibini, Novemba 15;
Ikhadi lememori le-128GB le-MicroSD
Ukuba ujonga ikhadi imemori ye-SD encinciUmzekelo, ukwandisa imemori yangaphakathi yesixhobo sakho esiphathwayo, iAmazon yenza kube lula kuwe ngale nto ivela kwi-Samsung onokuyithenga ngexabiso elincomekayo 33.54 euro. Ukuncitshiswa namhlanje kungaphezulu kwama-euro angama-47.
I-Intex Aqua Prime
Este I-Intex Aqua Prime inokuba liqabane elifanelekileyo kwinani elikhulu labasebenzisi abangabuzi kakhulu kwi-smartphone yabo. Ukongeza, ixabiso layo limema phantse yonke into kwaye singayithenga ngee-euro ezingama-65 kuphela.
Ungayithenga le Prime Intex Aqua Prime LAPHA.
Izibonelelo ngoNovemba 14
Apha ngezantsi sikubonisa izibonelelo zangoMvulo, Novemba 14;
I-Sony Smartwatch 3 iMidlalo
Ngaphandle kwento yokuba inani elikhulu leewatchwatches lifikile kwintengiso kumaxesha akutshanje, le Sony Smartwatch 3 Sport sesinye sezixhobo ezilungileyo esinokuzithenga. IAmazon yehlise amaxabiso ayo ukuya kuma-99 euros, eyenza ukuba ibe yenye yezona smartwatches zibalaseleyo ukuba sijonga umgangatho kunye namaxabiso.
I-Motorola Moto G4 Play
Ukuba ujonga isixhobo esitsha esiphathwayo kwaye awufuni kuchitha imali eninzi kuso, ngaphezulu kotyalo-mali olukhuselekileyo yile Moto G4 Play enezinto ezingaphezulu kwezinto ezinomdla, kunye ne Ixabiso namhlanje li-euro ezingama-139.
Phakathi kokubalulwa kwayo sinokuqaqambisa isikrini sayo esine-intshi ezintlanu, i-5GB ye-RAM, ikhamera ye-2-megapixel kunye nokubanakho kokusebenzisa ii-SIM khadi ezimbini ngaxeshanye.
Gcina ukhumbula ukuba phakathi kwangoku ukuya kumhla wama-20 siza kubona ezinye izibonelelo, esiza kukubonisa zona yonke imihla kweli nqaku, ke ungalibali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » NgoLwesihlanu omnyama ulungile kwikona kwaye zezinye zezona zinto zintengiso zangaphambili
Ngokwe-KGI Apple inokumilisela i-iPhone entsha ye-5,2-intshi enesikrini se-OLED